Nabadgelyada Wanaagsan tixraac saaxiib iyo inaad kasbato macaamilada M & S! - Tamarta kuxiran
Home > Tixraac saaxiib oo kasbasho macaamiisha M & S!
Waxaan jecelnahay inaan ku faafinno ereyga ku saabsan "Energy Energy" waxaanan ku jeclaan lahayn inaad noo soo dirto saaxiibadaa iyo qoyskaaga Devon iyo Cornwall si ay ugu suurta gasho in ay helaan lacag la'aan ama kabitaan lacag la'aan ah iyada oo loo marayo deeqda deeqda. Haddii aad u mahadsan tahay, haddii ay sii wadaan shaqooyinka ku jira bilaha 6, waxaan kuu soo diri doonaa foojarrada Marks and Spencer sida hoos ku qoran:
Waxyaabaha qashin-qubka ama laydhka godka ayaa shaqaynaya - £ 20 ee foojarrada M & S
Warshad batrool beddelaysa - £ 100 ee foojarrada M & S
Gaas ama LPG kuleyliyaha 50 ee foojarrada M & S
Heerka kululeeyaha oo dhan oo kor loo qaado - £ 50 ee foojarrada M & S
Kaliya kor u qaadida kontoroolka kuleylka - £ 10 ee foojarrada M & S
Isku duwo markaad shaqaynayso!
Haddii aad qabato shaqooyin la dhameeyo oo aad bixinayso kharashka shaqada, waxaad dooran kartaa inaad labalaabiso xaddiga lacagta saxiibka marka saaxiibkaaga uu isku mid yahay sida adiga, kadibna waxaad codsan kartaa inaad ka qaadato qiimo dhimis shaqooyinka Sidaa daraadeed haddii aad tixraacayso saaxiib kuu haysta shidaal saliida lagu rakibay oo aadna haysatid boorso saliid ah, waxaad isku dari kartaa £ 100 qarashka gudbinta iyo halkii aad ka heli laheyd £ 200 qiimaha shaqooyinka aad dhamaysay! Fadlan ogow in lacagta laga jarayo oo keliya marka la sameeyo labadaba shaqooyinka la dhammeeyey iyo wax kasta oo maaliyad dhaqaale ah ayaa la sameeyey.
Fadlan hubi inaad haysatid fasax saaxiibkaa ah si aad u soo dirto faahfaahintooda iyo in ay ka warqabaan sababta aan ula xiriiri doonno. Waqtigan xaadirka ah waxaan ku qaadan karnaa oo kaliya in loo diro Devon iyo Cornwall.
* Foojarrada M & S waxaa la bixin doonaa oo keliya marka foomka boggaan ee dhamaystiran iyo marka qofka la soo gudbiyay uu shaqadooda si guul leh u dhameystiray Energy Energy ee Devon ama Cornwall bilaha 6 ee taariikhda foomkan loo gudbiyay. Halkaas oo isla mar labaad la soo gudbiyo, waxaanu ku siin doonaa foojarrada qofka u soo gudbiyay foomka taariikhda ugu horreysa. Foojarrada si toos ah looma dirin, waxaad u baahan doontaa inaad nala soo xiriirto marka aad ogtahay in shaqadaada saaxiibbadu ay dhamaystiran tahay si aad u codsato foojarradaada. Foojarrada waxaa lagu soo diri doonaa maalmaha 30 ee codsigaaga si guul leh lagu xaqiijiyo by Energy Energy. Waxaanu xaq u leenahay inaanu kala beddelno ama aan ka baxno dalabkan wakhti kasta laakiin waxaan u hoggaansami doonaa codsiyada foojariga oo ansax ah oo la sameeyey ka hor inta aan wax isbedel ah. Kuma tixi kartid naftaada adoo isticmaalaya dalabkan.